Uma umsunguli inkampani ongashadile, kanye banquma ukuyeka umsebenzi, isihloko kuyosiza kule ndaba. Cabanga indlela ekucwileni ezikweletini inkampani nelungu elilodwa. Step by step Umhlahlandlela iqukethe incazelo eningiliziwe indlela lokhu okwenziwa ngayo.
Ukumiswa nokwesula izinhlobo zalo
Ngokuvamile on the Elimination of isiqalo ukucabanga lapho ngokuqinile ababekuqongelele izikweletu kakhulu noma imisebenzi it is hhayi kwenziwe kuyo yonke. Ukumiswa kungaba izinhlobo ezintathu:
Inketho kuqala kuyoba kungenzeka kuphela uma uma yezimpahla Inkampani kuyoba kwanele ukuba isifundazwe sikhokhele esikweletini okuholela. Cishe yonke inqubo, kusukela ngalo igxathu negxathu Umhlahlandlela ngokumiswa inkampani nge umhlanganyeli olulodwa, libekwe kahle the Civil Code. Kuyinto osebenzayo ukuqeda yonke jur. abantu. Ake sihlole le nqubo ukuze.
Okokuqala, isinqumo senziwe
Isinqumo ukuvalwa ngokuzithandela umsunguli kuthatha bebodwa. Lapho iqhaza eziningana, it is ngomumo. Futhi endabeni umhlanganyeli kuphela kuphela edingekayo isinqumo sakhe. Step by step imiyalelo ukuvalwa inkampani nge umhlanganyeli ematheni iqala isiphelo sesimiso izinkinga ezilandelayo:
Kwezinye izimo (yezinhlangano ezinkulu), kungcono liqoke ikomidi idilize. Kodwa-ke ngeke kuthinte inqubo. Uma kamuva udinga ukushintsha amalungu liquidator noma ikhomishini ekucwileni, lokhu ngokuvamile akuyona inkinga.
I liquidator ithumela isaziso intela ka ekuvalweni indlela ethile yokuma (R15001). Lokhu kumele kwenziwe zingakapheli izinsuku ezintathu nje isinqumo ekucwileni ezikweletini ibhizinisi.
Kanye isaziso ababebakhonza isinqumo iqembu sole nokuqeda inkampani. Phakathi nezinsuku ezinhlanu zokusebenza igunya yokubhalisa ayakuphuma ngesitifiketi ngokuqinile kuyinqubo ngokumiswa.
Ngaphambili, isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo ukuvalwa inkampani nge umhlanganyeli yedwa iqukethe isigaba ku isidingo isaziso izimali extra-kwesabelomali. Nokho, okwamanje (kusukela ngoMeyi 2014), lesi sibopho eye yanyamalala. RPF kanye FSS Kunoma yikuphi, ukuthola lolu lwazi uhlelo yangaphakathi kwegazi ngomshini amadokhumenti.
Umbuzo ukuthi ukuqhubeka nokusebenza ngesikhathi silungiselela ukuvala ibhizinisi? Impendulo ingu-yebo. Yiqiniso, isenzo kungenzeka, kodwa njengoba ukuvalwa inqubo iyasebenza phezu liquidator futhi ifemu ziwumthwalo izibopho ezithile iyonke. Ngakho-ke, umsebenzi kufanele kuqala okuqondiswe ekuqedeni.
Emva kokuthola okungenayo kusuka bentela uqhubekele esigabeni esilandelayo, uma ukuqedwa Imininingwane ishicilelwe iwuhlelo olukhethekile - "Bulletin of the state. yokubhalisa. " Khona-ke kufanele ulinde izinyanga ezimbili.
Yonke imibuzo ephathelene ukushicilelwa zingatholakala ku-edition iwebhusayithi. Ngaphezu kwalokho, kukhona ugcwele isicelo. Ngemva kokuhlola umphathi wenza inkokhelo imibhalo efanele zikhishwa. Uma inhlangano ine yogesi, yonke imisebenzi kungenziwa igcwaliseke, ihlezi ikhompyutha.
"Herald" ikhishwe ngoLwezithathu. Ukuze uzithathele izincwadi inikeza:
izincwadi ezimbili asekelayo;
Ukuqedwa iqabunga ekuqaleni eyatholakala kusukela igunya yokubhalisa;
isinqumo sokubhalisa siqala;
Ngokushesha nje lapho kushicilelwa izovela ezinyangeni ezimbili ezizayo ukulinda kungaba parallel ukuxazulula izimpikiswano ezihlobene.
Thola abakweletwayo - okumqoka enqubeni ngokumiswa. Phela, uma izimali ukuze ngikhokhe izikweleti akwanele, ukuvalwa ngokuzithandela kuzoholela ucabanga ekuqhutshweni.
Kukholakala ukuthi ababolekisi ungabiza isaziso esishicilelwe page the "Bulletin". Nokho, ukuze kugwemeke ukudideka futhi ukubukeka ezingozini ezingadingekile kangcono, uma isinyathelo yinkampani ngesinyathelo imiyalelo ukuvalwa nge umhlanganyeli olulodwa sizoqukatha isaziso eyengeziwe bonke abantu abakweletwayo ngalesi simo ezaziwayo. Isaziso ingase ithunyelwe e ifomu khulula incwadi eyigugu.
Ngethemu, okuyinto ngokukhethekile eyabelwa isaziso, ungenza ingobo yomlando. Kunoma iyiphi inhlangano kufanele agcinwe eziningi imibhalo, ezinye zazo kufanele kube archive ehhovisi lesifunda. Ngokwesibonelo, ulwazi HR kusiza abasebenzi baqonde esidlule umsebenzi. Ukuze uthumele imibhalo yomlando, kuzomele uxhumane emnyangweni ofanele, ukuletha ifomu efanele bese imibhalo ukuba imali ngoba imali. Le nqubo kuba amandla. Nokho, banamathele ke izinkampani ezimbalwa kuphela (ikakhulukazi izinhlangano ezinkulu).
Okwesikhashana balance sheet kumele ziqukethe yonke yenkampani nezikweletu, amafa nezinto zethu ezibonakalayo. Ukumiswa LLC elinento eyodwa ilungu izikweletu kanye idokhumenti kakade kakhulu phambili. Empeleni iphepha lokugcina, okutshengisa eziyimbangela ngesisekelo ulwazi oluqoqiwe. Lokhu utshela ngubani, kanjani futhi obani okufanele isimo sezimali lapho. Kuyinto efiselekayo ukuthi kulesi sigaba zonke izingxabano ngegunya intela, RPF kanye FSS abangu zihleliwe kakade.
Okwesikhashana balance sheet ayinayo indlela ethile. Eqinisweni, ngokuvamile lithathwe njengendlela isisekelo balance sheet, kodwa ngaphezu kuba idatha esithunyelwe akasifakanga kuzisho futhi zomthetho inkampani, lapho ukuvalwa Kwenziwa ematheni ilungu LLC.
Isinyathelo by step imfundo esabela ukuvalwa ibhalansi ebalulekile. Kufanele kwenziwe ikhumbula yokuthi:
izinyanga ezimbili kushicilelwe udlulile;
inhlangano is hhayi olwenziwa imithetho;
ukuhlolwa kwendawo awuzange kwenziwe.
Ukuhlolwa Site - lena isinyathelo esisodwa nje, okuyinto eyenziwa nge nokuqedwa ematheni ilungu LLC. Manual unamalungiselelo esithé ngqo kule, kodwa inqubo on-site wokuhlola ngaso sonke isikhathi kunikezelwe.
Uma yena okuqalwe ibhalansi ukuvalwa akukuniki kuze kube kuqedile. Izizathu eziyinhloko ngenxa ngalo intela enquma ukuqala ukuhlola kukhona izinsolo ukuthi intela ikhokhwe akuyona olunembile ngempela. Kuyefana nasendleleni yokubika. Ukuhlolwa Imigomo bayonikezwa kulapho cishe ephakeme inzuzo le nkampani. Ukuze lokhu kube ezimali kahle.
Kodwa uma inkampani esebenza esifundeni Moscow nge inzuzo encane, bese isheke ungakwazi ungakhathazeki. Into esemqoka ukwenza ukukhokhwa kwezintela, futhi wafakwa ukubikwa kwesikhathi.
Ake sithi isheke eyenziwa noma cha nqumela nhlobo, nayo yonke imibandela, okuyinto okwamanje kuhilela nokuqedwa inkampani ezimele nelungu elilodwa. Step by step imfundo eyengeziwe kuyinto ukwethula isaziso kwabasemthethweni bentela kwifomu R15001. Ngomqondo onabile, wayengenazo izincwadi ezengeziwe inamathelisiwe kuyadingeka ayisekho. Nokho, uma kwenzeka ukuthi singabaza lokho igunya yokubhalisa Ungahambisa iphakethe elandelayo, ngaphandle kwesaziso:
zesikhashana-balance sheet (bentela edingekayo isitembu phezu kwalo phambi, musa manje kudingeka);
isinqumo ukwamukelwa yayo;
ikhophi ikhasi kushicilelwe.
Lokhu ukuphelela kolwazi intela kuyoba zingaphezu kokwaneleyo.
Ngemva kwezinsuku ezinhlanu (ukusebenza) emva imibhalo ziye wapha, ukuqopha ishidi ukubhaliswa igunya ekhishiwe. Naye ezandleni Uze lapha ukusizwisa esigabeni sokugcina ukuqonda kanjani ukuqeda inkampani nelungu elilodwa. Step by step Umhlahlandlela kunikezwa ngokuningiliziwe esihlokweni.
Yini enye okudingeka yenziwe ngalesi sigaba, ngakho-ke kuba ukubhekana impahla esele futhi ukuhlola ukuthi inkinga ixazululiwe ne Pension Fund. Iphuzu lokugcina kubaluleke kakhulu. Ngakho kungcono ukuya khona mathupha futhi uqiniseke ukuthi akukho ngaphezulu inhlawulo kanye nezinye izimali ezisele. Okulandelayo, kufanele ukuvala i-akhawunti yamanje.
Lapho zonke izingqinamba yenhlangano kusingathwa ne abakweletwayo futhi nezindaba sezixazululiwe, ihlala yodwa ukwazisa intela futhi ukwamukelwa ishidi ukuvalwa ibhalansi. Kulokhu, akudingekile ukuba ukuvalwa Ltd. nge party eyodwa kanye nokulinganisela zero etholakala ngenxa yalokho. Into esemqoka ukuthi kubonakala izibalo kuhambisane zesikhashana-balance sheet.
Njengoba zenye, futhi enye indlela ekhethekile ayigunyazelwanga. Ngakho-ke, isisekelo zingakhiqiza eliphakathi nendawo ne anezele kunesidingo.
Ngalesi sikhathi, le igunya yokubhalisa uzokwaziswa esebenzisa lezi zincwadi ezilandelayo:
16001 ifomu lesicelo, okuyinto ukuba kwasayinwa isignesha liquidator;
Irisidi zombuso komsebenzi yokukhokha;
isinqumo imvume idokhumenti (ukuvalwa balance sheet);
nebhalansi nesiginesha we liquidator;
isitifiketi kusukela FIU ukuthi akukho izikweletu ezingaphezu kuka inhlangano asipheli.
Ngezinye izikhathi FIU akusho isitifiketi elichaza ukuthi ehhovisi lentela, ngakho babona ulwazi ngokusebenzisa idokhumenti ngogesi. Khona-ke kufanele uqiniseke ukuthi kukhona ulenga akukho inhlawulo ezinkampanini ayisekho.
Inqubo ucabanga sabelwe kunjalo, uma inhlangano ingasakwazi ukukhokhela off bonke kweletu zakho, bekwenza ngezindleko zabo. Lena inketho ehloniphekile, kodwa kufanele kwenziwe ngokucophelela, njengoba amaphutha ingaholela ngisho nasekukholelweni ukuthi amacala.
Ukuqedwa ngokusebenzisa ucabanga udlulisela uhlelo lula noma lelo zinga.
Ngokuvamile iqala inkampani yokuzithandela ukuvalwa nelungu elilodwa. Imiyalelo, isampula okuyinto eboniswe ngenhla, kuzosiza ziphathelene isikimu ejwayelekile. Kodwa uma ngesikhathi, njengoba zizokwenziwa ukuvalwa zesikhashana-balance sheet, kutholakala ukuthi umsebenzi wokuthatha angabuyisela inkampani akuyona, inqubo izoqhubeka kohlaka umthetho ngongakwazi ukukhokha izikweletu, okusho ezikweletini.
Khona-ke, ngo-Court of Arbitration kufanele zithunyelwe isimemezelo siqaphela inkampani ungeke uzithole usuwile. Inkantolo uyoqoka umphathi. Kulesi lokuphakamisa izokhetheka njengomunye walabo ezinikeza okweletayo. Lena inzuzo enkulu indlela zokuqeda, kusukela kulesi simo kungenzeka ukubala ubuqotho bazo kokulawulwa.
Uma uhlela ukuba ukubhalisa uhlelo olusemthethweni, le yokusetha wokuqala ngemuva kokuba inkantolo inquma ukuthi ucabanga lenkampani, bese receivership. Ngemva kwalokho, landela izinyathelo evamile ucabanga ekuqhutshweni.
Indlela ehlukile: ushintsho abasunguli
Sukani nokuqedwa eside kungasiza ngendlela ukushintsha amaqembu ayinhloko yenkampani, ukuthi owasungula kanye accountant abakhulu. Lona kuyindlela elula kakhulu isikhathi kuzothatha cishe ezinsukwini ezingu-14. Futhi, indlela futhi kuyabiza kakhulu.
Nokho, kukhona ezinye izingibe. Iqiniso liwukuthi kakhulu bazosala irekhodi e Register Enobunye we umsunguli yasekuqaleni. Ngakho-ke, kukhona ingozi ukuthi abasunguli okwalandela kungase kudonse ababengamaSulumane ukuba isibopho sezomthetho ngokuzibona.
Kuhlelembisa - ukubusa
Lolu khetho kunenzuzo kakhulu kunaleso langaphambilini, ngoba kulesi simo irekhodi ezincwadini namanje inyumbazana futhi imibhalo edingekayo ekuqalisweni kokusebenza bit kabusha. Kodwa-ke lokhu kuzothatha 2-3 izinyanga isikhathi. Futhi kulesi simo, sincoma ukuthi nikwenza umkhuba ukufeza ngokushintshwa komholi, okungukuthi, eqinisweni, owokuqala ukusebenzisa inketho ezihlongozwayo. Ngesikhathi esifanayo, futhi kukhona ingozi ngokuletha sezomthetho ngokuzibona.
Ukumiswa Inkampani nge umhlanganyeli yedwa: akukho imisebenzi
Lokhu kukhetha elula. Kusho ukuthi le nkampani ufikile, yena, futhi, ayinakho izikweletu. Le nkampani ayikwazanga kalula bungaveli:
uhlelo Ezivamile enikezela izinyathelo ezichazwe ngenhla.
Indlela ehlukile yokunikeza, isibonelo, ukudayiswa noma kabusha.
Inhlangano obonwa yimali ngeke ngesizathu esilula ukuthi alinaso izikweletu. Le nkampani liseduze kakhulu njengoba nje indawo ukuhlolwa, ngisho nenzalo ingxenye iziphathimandla zentela ayitholakali.
Kulesi sihloko sabuka izindlela ezahlukene kanjani ukuqeda inkampani nelungu elilodwa. Imiyalelo ikakhulukazi ukubhekana uhlobo ngokumiswa yokuzithandela. Ngokuvamile, uma uMnyango ezimali inkampani kwenziwa kahle, kwi ekucwileni ezikweletini inkampani kuthatha akukho kuka izinyanga ezine, ngemva kwalokho inkampani ayifakiwe irejista.
Inhlawulo Xenon: Yinganekwane Noma Yiqiniso?
Umshado Civil: division of impahla
Indlela ukubhala isicelo ukuxoshwa
Emholweni likathisha kanjani? ezimali
Umhlahlandlela wakho ukuba Guangzhou: yezitolo
Igumbi Cypress: ukutshala nokunakekela
Propolis Futha: Umhlahlandlela kanye nokubuyekeza
Indlela ukukhetha ikhamera: amathiphu namasu
Nelineni Ifanele amahhotela
Flora: okushiwo izimbali?